The Sims FreePlay အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
5.64.0 for Android
4.0 | 100,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် APK（55.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် The Sims FreePlay
Sims ™၏ဖန်တီးသူများမှမိုဘိုင်းတွင် Sims အတွေ့အကြုံရှိသည်။ သင်၏ SIM အသိုင်းအဝိုင်းကိုချဲ့ထွင်ရန်နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စတိုင်, အလွယ်တကူ simoleons များရရန်နှင့်လမ်းတစ်လျှောက်ဆုများကိုကောက်ယူရန်အပြည့်စုံသောပန်းတိုင်များ။ သင်၏ Sims ကိုပျော်ရွှင်စွာထားပါ, ပျော်စရာကောင်းပြီးပြည့်စုံသောဘဝနေထိုင်ရန်သင်ကူညီပေးပါ။
SIM-Fulating ဖြစ်နိုင်ခြေ။ သင်၏ Sims '' ဘဝ! SIMS 34 ခုအထိစတိုင်ကျပြီးရေကူးကန်များနှင့်အထပ်ငယ်များနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင် decor နှင့်ပြည့်စုံသောသူတို့၏အိပ်မက်အိမ်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ။ သင် Sims များများပိုမိုများပြားလာသည်နှင့်အမျှအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ, ကားရောင်းဝယ်ရေး, ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကမ်းခြေပင်နှင့်အတူ SIM Card ကိုတိုးချဲ့ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့်သင်၏အတွင်းဗိသုကာဒီဇိုင်းပညာရှင်များကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းတွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဗိသုကာနှင့်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူအားအလျင်အမြန်လွှတ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Sims ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြပါ။ သင်၏မိတ်ဆွေများ၏ SIM SIM CATES သို့ သွား. သင်၏သူငယ်ချင်းများ၏အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစွမ်းရည်ကိုသင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
ချိတ်ဆက်မှုဆက်ရှိနေပါ။ ဆက်ဆံရေးကိုစတင်ခြင်း, ချစ်ခြင်း, လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်မိသားစုရှိပါ။ တစ်သက်တာသူငယ်ချင်းများကိုလုပ်ပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုဂရုစိုက်ပါ။ ရေကူးကန်ပါတီများနှင့်အပြင်ဘက်တွင်ကင်ကိုထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ညအတွက်မီးဖိုဖြင့်ချနေအိမ်။ အခက်အခဲတွေအတွက်စိတ်နေစိတ်ထား၌? Sims မသွားသောအခါဒရာမာများစွာရှိသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်မိုက်မဲစွာပြုမူပါ။ မိသားစု0င်များကိုရိုင်းစိုင်းစားပါ, သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ရေးအဆိုပြုချက်ကိုပင်ငြင်းပါ။ ကလေးသူငယ်များမှသက်ကြီးရွယ်အိုများထံသို့သင်၏ပြီးပြည့်စုံသော Sims ဇာတ်လမ်းသည်သင်၏ဘဝ simulation တိုင်းတွင်ဖြစ်ပျက်နိုင်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှု? ဒရာမာနှင့် breakups? ရွေးချယ်မှုသည်အမြဲတမ်းဖြစ်သည်။
အလုပ်အားလုံးနှင့်အားလုံးကစားခြင်း - SIM'S 'SIM ရဲ့လုပ်ရတာ! ကွဲပြားခြားနားသောအိပ်မက်အလုပ်အကိုင်များကိုစတင်ပါ။ ရဲစခန်း, ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုနှင့်ဆေးရုံတွင် Sims 'ရက်များကိုပင်လိုက်နာပါ။ သင်၏ Sims အလုပ်သွားလေလေ, ကျွမ်းကျင်မှုများကိုပိုမိုလေ့လာပြီးလစာကိုမြှင့်တင်လေ, သူတို့အားလပ်ချိန်များတွင်ချက်ပြုတ်ခြင်း, ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း, Salsa ကခုန်ခြင်းနှင့်ခွေးကလေးလေ့ကျင့်မှုကဲ့သို့သောဝါသနာများကိုရွေးချယ်ပါ။ သူတို့မှာပိုပါ0င်လေလေ, ကလေးတွေကနေဆယ်ကျော်သက်တွေဆီအထိလူကြီးတွေအထိပါ။ သင်၏ Sims Love ဘဝကိုသင်ဖန်တီးသောအခါအခွင့်အလမ်းများအခွင့်အလမ်းများကအကန့်အသတ်မရှိ။
Instagram br> _________________
- ဤဂိမ်းသည် 1.8GB စုစုပေါင်းသိုလှောင်မှုလိုအပ်သည်။
- ဤဂိမ်းသည်အခမဲ့ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်, သို့သော်အပိုပစ္စည်းများအတွက်စစ်မှန်သောငွေကိုပေးရန်ရွေးချယ်နိုင်သည် သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်ကိုအားသွင်းပါ။ သင်၏ device settings ကိုညှိခြင်းအားဖြင့်0ယ်ယူရန်0ယ်ယူနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို https.a.com/legprivacyca//ws / en / pc /
ဘာအသစ်လဲ The Sims FreePlay 5.64.0
Sul Sul, Simmers! Let your Sim’s worries float away in their very own Japanese inspired sanctuary in the latest update of The Sims FreePlay! You’ll also enjoy:
-The new Influence Island Season 14! The event delivers contemporary minimalist ‘wabi-sabi' furniture and décor rewards.
- Crafting resources in the ‘Joyous Japan’ live event to unlockatraditional Japanese house lot!
Check out the official blog notes for more event dates!
The Sims: FreePlay - Gameplay Walkthrough Part 1 (iOS, Android)
The Sims Freeplay - How To Get Married and HaveaBaby (2020)
Sims FreePlay vs Sims Mobile - What's the Difference? (OPINION)
The Sims Freeplay Mod - 1999999999 Simoleons & LP Glitch (HOW I DID IT!!!) iOS & Android
The Beginning!! "Sims FreePlay" Ep.1
The Sims FreePlay 5.63.0
The Sims FreePlay 5.62.2
The Sims FreePlay 5.62.1
Sea Port: Travel, Build Town & Manage Ship Tycoon
Top Eleven 2021: BeaFootball Manager
New City Construction: Real Road Construction Sim
Classic Block Puzzle——Wood Block Puzzle Game
Kiss Kiss: Spin the Bottle for Chatting and Fun